Pure Fonosana - Famolavolana
Fonosana Ny fototry ny foto-kevitry ny Juice Pure dia singa ara-pihetseham-po. Ny fivoaran'ny famolavolana anarana sy ny endrika famolavolana dia mikendry ny fahatsapana sy ny fihetseham-pon'ny mpanjifa, izy ireo dia manendry ny hampijanonana ilay olona eo akaikin'ny talantasa ilaina ary atao azy ireo haka azy ireo amin'ny marika marika hafa. Ny fonosana dia maneho ny vokatry ny sombin'ny voankazo, ireo lamina maro loko maro pirinty mivantana amin'ny tavoahangy fitaratra izay mitovitovy amin'ny endriny. Manipika mazava ny sarin'ny vokatra voajanahary izany.
Anaran'ny tetikasa : Pure, Anaran'ny mpamorona : Azadeh Gholizadeh, Anaran'ny mpanjifa : Azadeh Gholizadeh.
Fonosana Azadeh Gholizadeh Pure